U-Ibon Martín: ungubani, ubhala kanjani nokuthi ushicilele ziphi izincwadi | Izincwadi Zamanje
Umthombo u-Ibon Martín: Heraldo de Aragón
U-Ibon Martín ungomunye wababhali baseSpain abakhulayo. Uma uthanda amanoveli anobuqili, imfihlakalo ethile futhi ngaphezu kwakho konke lokho, lo ngomunye wabalobi ukuthi njengamanje, incwadi ephumayo, incwadi enqobayo.
Kodwa, Ibon Martín uyaba ubani? Iziphi izincwadi ozibhalile? Lunjani ipeni lakho? Uma ungezwanga ngakho; noma uma umazi kepha ufuna ukwazi imininingwane eyengeziwe ngempilo yakhe, khona-ke sizokutshela ngomlobi.
1 Ngubani u-Ibon Martín
1.1 U-Ibon Martín njengombhali wenoveli
2 Lunjani ipeni lakho
3 Izincwadi zika-Ibon Martín
Ngubani u-Ibon Martín
Umthombo: Iphephandaba laseBasque
U-Ibon Martín uyintatheli. Wazalwa ngo-1976 eDonostia futhi wafundela ubuntatheli e-University of the Basque Country. Ngemuva kokuphothula iziqu zakhe, njengabanye afunda nabo, waqala ukusebenza. Imisebenzi yakhe yokuqala yayikwabezindaba bendawo, okwamnika ithuba futhi kwaba umkhuba wokusebenzisa ulwazi ayeluthole emakethe yezabasebenzi.
Ngaleso sizathu, nokuthile okungaziwa abaningi, yilokho U-Ibon Martín waqala ukubhala ngokuhamba. Kuyena, bekuyisifiso sangempela, ngoba uthanda ukuhamba, futhi nokukwazi ukusebenza entweni oyithandayo kuhlale kungcono. Ngalesi sizathu, kwaphela iminyaka eminingana ezinikele ekubhaleni kwabezindaba mayelana nokuhamba nemizila. Wabhala izincwadi eziningana zokuhamba, ikakhulukazi emizileni edabula izwe laseBasque. Ngakho-ke, waba ngomunye wochwepheshe abahamba phambili kwezokuvakasha emaphandleni nasekuzijabuliseni ezweni laseBasque. Futhi iqiniso ukuthi izincwadi zakhe azigxilile kuphela ezingxenyeni zomhlaba ezaziwa kakhulu, kodwa zaphinde zathola ezinye ezingaziwa kakhulu, ezazingezona ezokuvakasha kepha ezazinezimanga noma ezakwenza wathandana kakhulu kunezokuqala . Ngaphezu kwalokho, unikeze izeluleko eziningi nezinye izindlela zemizila noma zezindlela zokuhamba, njengemoto noma ukusuka edolobheni eliya kwelinye. Ukwenza lokhu, wasizwa ngu-vlvaro Muñoz Gabilondo, omunye umbhali wendawo kanye nochwepheshe ngezindawo nezindawo ababhala ngazo.
U-Ibon Martín njengombhali wenoveli
Sekuyiminyaka, u-Ibon Martín ehamba ezindleleni zeBasque Country futhi wazinikela ekushicileleni iziqondiso zokuhamba ukwenza lezi zindawo zaziwe, ikakhulukazi ukubuyisa ukubaluleka ababekade benakho. Futhi kwakungalezi zincwadi lapho akha khona umbono wenoveli yakhe yokuqala, "Isigodi esingenalo igama."
Lona Wayefuna ukugcina izimpande zakhe futhi ngandlela thile ahlanganise ukuthanda kwakhe ukuhamba futhi azi izinto ezingaziwa kakhulu nezibalulekile endaweni ngalowo mqondo abenawo engqondweni. nokuthi kancane kancane kwavela nabalingiswa nesakhiwo.
Eqinisweni, ngemuva kwaleyo noveli, waqhubeka nokushicilela, kulokhu izincwadi ezine, ezazisethwe ezinganekwaneni nasezinganekwaneni zehlathi lase-Irati, okuyi-thriller yaseNordic eyamthwebula.
Njengamanje, uyaqhubeka nokubhala. Incwadi yakhe yakamuva ethi, "The hour of the seagulls", yashicilelwa ngo-2021 futhi manje useba nempumelelo impela, emqinisekisa njengenkosi yezinsolo. Eqinisweni, kubhekwa ngaleyo ndlela kuphela eSpain, kepha nasemazweni omhlaba kuyakufanelekela ukuthi kube njalo futhi nabashicileli abaningi bakwamanye amazwe sebevele babheke kuwo ukushicilela imisebenzi yabo ngezinye izilimi.
Ngakho-ke sihlangabezana nombhali onomgwaqo omude ngaphambi kwakhe, oletha impela amanoveli amaningi amahle kakhulu.
Lunjani ipeni lakho
Umthombo: Huffington Post
Labo abafunde u-Ibon Martín bayavumelana ngemininingwane efanayo: uyazi ukuthi angamthinta kanjani umfundi. Indlela evezwa ngayo, ukuthi ibethula kanjani abalingiswa nokuthi indaba ihlela kanjani kubenza balinde ukulandela ukuze bazi ukuthi kuzokwenzekani kubalingiswa, kodwa futhi naleyo mpicabadala yokuthi ekugcineni iba ngumfundi ojwayelekile.
Iphinde ivelele i- izindawo nezimo ezichazayo, ezingokoqobo futhi eziyiqiniso kulokho okungabonakala, ukuthi abaningi banquma kwesinye isikhathi ukuya kulezo zindawo bayozibonela ngokwabo (mhlawumbe ngenxa yobudlelwano babo nezincwadi zokuvakasha engizibhalile ngaphambili).
Ngaphezu kwalokho, akungabazeki ukuthi wenza ucwaningo oluningi ngamanoveli akhe, njengoba imininingwane nezindlela zokulingisa zabalingiswa, kanye nesakhiwo kanye nemfihlakalo uqobo, kunesisekelo. Ngalesi sizathu, uchitha isikhathi esiningi ezicwaninga ngokwakhe ukuze akwazi ukunaba kabanzi ngale noveli nokuthi ayikho imiphetho evulekile enga "khathaza" umfundi.
Izincwadi zika-Ibon Martín
Uma usanda kuhlangana nombhali futhi ufuna ukwazi ukuthi yiziphi izincwadi azibhalile, sizokutshela ukuthi akanazo eziningi emakethe. Noma kunjalo. Futhi ukuthi umsebenzi wakhe wokubhala waqala ngo-2013, ngenkathi ekhipha inoveli yakhe yokuqala, "Isigodi esingenalo igama."
Lo mbhali, njengabanye abaningi, ushicilela inoveli eyodwa kuphela ngonyaka, futhi kufanele kubhekwe ukuthi ngo-2018 akazange ashicilele, ngakho-ke kufanele sikweletele izincwadi eziyi-7 zokubhala kwakhe. Lezi izi:
Isigodi esingenalo igama.
Ihora lezinyoni zasolwandle.
Kumele kushiwo ukuthi ezine zalezo zincwadi - I-Tulip Dance, i-Cage Salt, i-The Last Akelarre ne-The Shadow Factory - bayingxenye yeqoqo le-Lighthouse Crimes.
Singagqamisa ezincwadini, isibonelo, ukuthi i-The Tulip Dance yakwazi ukuyenza ohlwini lwabathengisa kakhulu, okwenza umsebenzi wakhe wakhuphuka ngendlela yezulu futhi abaningi baqala ukumbona evelela ngaphakathi kohlobo olujabulisayo ngaphakathi nangaphandle izwe. Kodwa-ke, kuze kwaba yisikhathi samaSeagulls lapho athola khona isihloko senkosi yezinsolo.
Manje njengoba usumazi u-Ibon Martín kancane, sekuyisikhathi sokuthi, uma ungafundi lutho ngaye, uyakhuthazwa ukuthi wenze njalo. Ungaqala ngenoveli yakhe yokuqala, futhi ngaleyo ndlela ubone ukuvela kwezinto ipeni lakhe elenziwe. Kepha ungaqala nangeyokugcina ethunyelwe futhi, uma uyithanda, funa eyedlule. Ngaphandle kwalezo zincwadi ezine ezakha i-The Lighthouse Crimes, ezinye zingafundwa ngokuzimela. Uma kwenzeka usuyamazi futhi umfundile, ingabe uncoma noma iyiphi yezincwadi zakhe ngaphezu kwenye? Singathanda ukuzwa ngakho!
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » U-Ibon Martin
UMaría Dueñas: izincwadi